Dagaalka Ivory Coast oo sii fidaya - BBC Somali
Dagaalka Ivory Coast oo sii fidaya
29 Maarso 2011
Image caption Dagaallada Ivory Coast oo sii xoogeystay
Hay'adaha gargaarka ee Qaramada Midoobay waxay sheegayaan in dagaalka Ivory Coast uu haatan ku fiday dhul aad uga fog caasimadda Abidjan, iyadoo uu galaafanayo tobannaan kun oo dad rayid ah. Wakiillo hay'adaha gargaarka oo ka hadlay magaalada Geneva waxay sheegeen in kumannaan dad ah ay galeen kaniisado iyo xarumaha dowaldaha hoose ee magaalooyin badan, hase ahaatee aanay dadkaasi wax Gargaar ah helaynin, iyadoo cuntada, biyaha iyo daawooyinka ay intuba gabaabsi yihiin.
Iyadoo dagaallada Ivory Coast ay sii xoogeysanayaan siina fidayaan ayaa waxaa sii yaraanaya galaangalka hay'adaha gargaarku ay ugu tegi karaan, sidaas waxaa sheegay Jean-Philippe Chauzy oo ka tirsan ururka caalamiga ah ee dadka waddammadooda ka haajira.
Dhinaca kale, Kumannaan dad ah oo kale ayaa u qaxay dalalka deriska ah sida Liberia iyo Ghana. Hay'adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ayaa sahay gargaar u gudbinaysa laakiin baahida ayaa sii kordhaysa, waxaana ay ha'adda qxootigu diiwaan gelisay toban kun oo qof oo cusub oo gaaray hal meel oo ka mid ah dalka Liberia toddobadii maalmood ee la soo dhaafay oo keliya. Haweeney u hadashay hay'adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dadkaas ay ka sheekeynayaan arrimo naxdin leh oo ay ka mid tahay in qaarkood ay argagax awgii carruurtoodii ka soo carareen.